Translate center for global business con in Burmese
Results for center for global business conduc... translation from English to Burmese
John Hopkins University Center for Systems Science and Engineering မှ တိုက်ရိုက်အပ်ဒိတ်ပြုလုပ်ပေးနေသည့် အွန်လိုင်း မြေပုံနှင့် ဒတ်ရှ်ဘုတ်တိုက်ရိုက်
ထိုပွဲအား ဆန်တို့(စ) သည် "အကောင်းဆုံး အတွေ့အကြံုတွေ၊
The Fukushima Daiichi nuclear disaster happened after the major earthquake and tsunami on 11 March, 2011 (see here for Global Voices coverage).
(ကမ္ဘာ့အသံက သတင်းပို့ခဲ့တာကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
In 2013, thanks toafellowship at the International Center for Journalists (ICFJ), Santos created Chicas Poderosas to help change things in the industry.
ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာ သင်တန်းများသည် နည်းပါးနေသေးပြီး အမျိုးသမီးများကို အထူးအာရုံစိုက်သော အစီအစဉ်များကလည်း အလွန် နည်းနေသေးသောကြောင့် နည်းပညာသုံး စာနယ်ဇင်း လောကတွင် အမျိုးသမီးများကို ကိုယ်စားပြုမှုဟု လိုနေသေးသည်ဟု ဆန်တို့(စ)က ပြောပါသည်။
According to the Bahrain Center for Human Rights (BCHR) statistics from February of this year, there are about 400 children in Bahraini prisons being held for politically motivated charges.
Bahrain Center for Human Rights (ဘာရိန်း လူ့အခွင့်အရေးစင်တာ -BCHR) ၏ ဤနှစ်ဖေဖော်၀ါရီမှစသော စာရင်းဇယားများအရ ကလေး ၄၀၀ ကျော်သည် ဘာရိန်း ထောင်တွင် နိုင်ငံရေးအကြောင်းခံသော စွဲချက်များဖြင့် အဖမ်းခံထားရပါသည်။
On 28 January 2020, the Center for Disease Control—the leading public health institute of the U.S. government—announced they had developed their own testing kit.
2020 ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ 28 ရက်တွင် အမေရိကန်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရှေ့ဆောင် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုက သူတို့အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင် စမ်းသပ်ကိရိယာအား တီထွင်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဝါး အမျိုးသားစင်တာ (NCGM) သည် နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသော အရိပ်လက္ခဏာပြသနေသည့် လူနာများ၏ ကုသမှုအတွက် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါအတွက် ရှူသွင်းရသော ကော်တီကိုစတီရွိုက်ကို Teijin ၏ အယ်လ်ဗက်စ်ကို (စစ္စလီဆိုနိုက်) အတွက် ကုသမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
&quot;သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများနှင့် ရုပ်သံအစီအစဉ်များအပါအဝင် ဖြစ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းမှန်သမျှကို အသုံးပြုပြီး ဤသတင်းစကားကို လူအများသိအောင် ထုတ်ပြန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောကြားထားပါသည်။&quot;&quot; Politico၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့် Bloomberg ကဲ့သို့သော သတင်းရင်းမြစ်များအရ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရသော နိုင်ငံများသို့ တရုတ်နိုင်ငံမှ အကူအညီများ ပေးပို့ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် ဝါဒဖြန့်မှု ကြိုးပမ်းချက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။&quot;
dux ducit (Latin>Italian)one year (English>Czech)causam dicere (Latin>Italian)imperium (Latin>Italian)fortunam suam quisque parat (Latin>Italian)sakit ng mata ko (Tagalog>Korean)නන්දිනීගෙ (Sinhala>English)vbulletin (English>Czech)habíamos simpatizado (Spanish>Chinese (Simplified))posrednika (Serbian>English)google 1 (Persian>English)in allegato le invio la distinta di versamento (Italian>English)presente (Italian>Xhosa)snow turning to rain in the night (English>Chamorro)hic et nunc sapere aude (Latin>Italian)actions speak louder than words tagalog (English>Tagalog)momere (French>English)magkakaisa (Tagalog>Maori)what the hack (English>Bengali)lapsus linguae (Latin>Ukrainian)injured (English>Finnish)xico (English>Spanish)olive in secchiello (Italian>English)pontifex (Latin>English)yasaklanmıştır (Turkish>Albanian)